Ndị otu a kwuputara nke a site n'ọnụ onyeisi ha bụ Sinetọ Emmanuel Udom n'ọgbakọ ha nwere n'obi gọọmenti steeti Imo dị n'Owerri bụ isi obodo steeti ahụ. Nzukọ ahụ jikọtara ndị gọvanọ sitere mpaghara Ndịda-Ọwụwa anyanwụ na ndị sitere mpaghara Ndịda-Ndịda anyanwụ ala anyị.
Dịka Sinetọ Udom siri kwuo, mgbakụta azụ nke gọọmenti etiti gbakụtara ndị mpaghara ahụ site n'enweghị ihe nkwalite obibi ndụ ọbụla ha wunyere n'ebe ahụ, bụ nnọọ nnukwu ihe mwute ma bụrụkwa otu n'ime ihe ndị na-eweta ịkpọ ganị ganị na mpaghara dị iche iche n'ala anyị.
Onye gọvanọ ahụ, ka ọ na-akpọpụtasị ebe o si ewute ndị otu ahụ, nke gụnyere emeghị nwata ka e mere ibe ya, aghụghọ na ịmado eziokwu ihu n'ala, toro ndị so wee zọpụ ụkwụ iji hụ na mmanye ahụ a manyere ndị Igbo bi na mgbago ugwu ala anyị ka ha kwapụ bụ nke amịtaghịzị mkpụrụ.
Sinetọ Udo kwuputazịrị olile anya ya na nke ahụ bụ nke ikpeazụ mmadụ ọbụla ma ọ bụ mpaghara ọbụla ga-ekwukwa ụdị ihe ahụ banyere ndị Igbo, ma sịkwa na ndị otu ahụ kwụsị ike na mkpebi ha ịhụ na udo tọrọ atọ na-achị n'ala anyị.
O toro ndị ọrụ nchekwa dị iche iche n'ala anyị maka udo tọrọ atọ dị ugbu a, ọ kachasị na mpaghara Naịja Deelta n'ihi na nke ahụ emeela ka enwee mgbago nọ ọnụ mmanụ a na-egwuputazị na mpaghara ahụ, nke mezịrị ka ego a na-enweta na ngalaba mmanụ n'ala anyị gbagoo, ma kwuputazie mkpa ọ dị itinyekwu ihe n'ego ndị steeti ahụ na mpaghara ahụ na-enweta site n'akpa ego gọọmenti etiti.
Na mbụ n'okwu ya, onye a nọ be ya, bụ gọvanọ Owelle Rochas Okorọcha rịọrọ maka udo na nkwalite nke ihe onwunwe na mpaghara ahụ iji hụ na ụmụafọ mpaghara ahụ nọ n'ezi ọnọdụ na-agbanyeghị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye nọ na ya. O toro otu ahụ, bụ nke a ka hibere ọhụụ, ma kpọọ oku ka ha kwụdosie ike n'ịdị n'otu ahụ n'ihi na site na ya ka ha pụrụ isi nweta ụfọdụ ihe ndị mpaghara ahụ na-achọ.
Nke a bụ nke atọ ndị otu na-anọkọ ọnụ dịka otu jikọtara ndị gọvanọ sitere mpaghara ndịda anyanwụ, ma bụrụkwa nke e jiri ofufe nro pụrụ iche wee malite, bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ nsọ steeti ahụ, nke ndị gọvanọ ahụ sonyekwara na ya.
Ndị ọzọ sonyere na nzukọ ahụ gụnyere: aka na-achị steeti Abịa bụ gọvanọ Okezie Ikpeazụ, nke Delta bụ gọvanọ Ifeanyi Okowa, nke Enugwu bụ gọvanọ Ifeanyị Ugwuanyị, nke steeti Rivaas bụ gọvanọ Nyesom Wike, tinyere nke Bayeesa bụ gọvanọ Henry Dickson.